रमजान समय तालिका २०१९: दिनमा कति घण्टा उपहास ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
काठमाडौँ । मुस्लिम समुदायको पवित्र पर्व रमजान(रमदान) मंगलबारबाट शुरु भएको छ । ७ मे बाट शुरु भएको रमजान एक महिनासम्म चल्नेछ ।
रमजान महिना मुसलमानका लागि शुभ-लाभको महिना हो । रमजानमा इस्लाम धर्मावलम्बीहरु उपवास बस्छन् । त्यसलाई ‘रोजा’ भनिन्छ ।
सूर्य उदाउनुभन्दा करिब दुई घण्टाअगाडि केही ‘सरगाही(खानेकुरा)’ खाएर प्रारम्भ गरिने रोजा घाम अस्ताएपछि फलफूल तथा मिठाइ खाएर समाप्त गरिन्छ, जसलाई ‘ इफ्तार’ भनिन्छ । यो समयलाई रोजा खोल्ने समय भनिन्छ । दिनभर केही पनि खान नहुने यो पर्वमा मुसलमानहरूले आ-आफ्नो गच्छेअनुसार विभिन्न किसिमका परिकार बनाई रोजा खोल्ने गर्छन् ।
रमादान समय तालिका २०१९: दिनमा कति घण्टा उपहास ?
अब पाकिस्तान भारतसँग वार्ता गर्न इच्छुक छैन: प्रधानमन्त्री खान
एजेन्सी । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले भने...